जीवन बीमा व्यवसाय : पुरानालाई पछि पार्दै नयाँ कम्पनीहरू « Sajhapath.com
जीवन बीमा व्यवसाय : पुरानालाई पछि पार्दै नयाँ कम्पनीहरू
काठमाडौं,भदौ २२ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना अर्थात् साउनमा रू. २ अर्ब ७४ करोड बराबरको नयाँ व्यवसाय गरेका छन् । साउनमा ६ लाख २३ हजार ८४४ ओटा नयाँ बीमालेख विक्री गरेर जीवन बीमा कम्पनीहरूले सो बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् ।
साउनमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसाय २७ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको साउनमा कम्पनीहरूले रू. १३ अर्ब ४ करोड कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । चालू आवको उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले रू. १६ अर्ब ६१ करोड कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको बीमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
साउनमा नयाँ व्यवसाय गर्ने मामलामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्र स्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले साउन महीनामा रू. ५८ करोड प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो स्थानमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स देखिएको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा २५ करोड प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको प्रभु लाइफले रू. २३ करोड प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।
३ वर्षअघि नेपाली बीमा बजारमा १० ओटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कम्पनीले पुरानालाई पछि पार्दै गएको देखिएको हो । बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्ने उत्कृष्ट ५ कम्पनीमध्ये ३ ओटा त नयाँ कम्पनी रहेका छन् । आर्थिक अभियानबाट